Otu esi achọta onye ndụmọdụ SEO | Martech Zone
N'ụtụtụ a, mụ na otu enyi m nwere ụlọ ọrụ na-akpọ ya ka ọ nye ya ọrụ nyocha Ọchụchọ Ngwanrọ dị ọnụ ala. O nwere obi uto banyere ohere a, mechaa chota oru di omimi nke g’enweta ya DK New Media nwere ike… kama na obere ego nke na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ọ dị mma, bekee… anyị nwere ike ịdebanye aha!
Ihe mbụ m na - eme ma mmadụ nwee obi ụtọ otu a bụ nyocha ha search engine ogo iji ngwá ọrụ dị ka Semrush. Ga-ahụ nsonaazụ ya n'aka nri. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, nsonaazụ ndị a na-ewute. Emechiela m aha ụlọ ọrụ nke bụ ọkwa nke anọ (ugh!) Ha anaghị eto nke ọma (4 ma ọ bụ karịa) n'otu oge!
Otu ihe edetu na nke a… M nwere ike ikwu na ị na-ele ha anya na saịtị na dị ka Semrush n'ihi na ụlọ ọrụ ị na-achọ nwere ike ọ gaghị ọkwa maka asọmpi asọmpi dị ka "SEO". DK New Media, dịka ọmụmaatụ, kwụrụ na okwu metụtara New Media ahia. Anyị na ụfọdụ ndị ahịa anyị na - arụ ọmarịcha ọrụ, mana nke ahụ bụ naanị otu ngwa ọrụ na ngwa ọrụ anyị. Anyị maara na a uzo ahia ahia na leverages niile na ọdabara na-ajụ (gụnyere SEO) na-arụ ọrụ kasị mma. Agbanyeghị, enweghị mgbagha n'ịtụle nsonaazụ ọchụchọ anyị maara n'ezie ihe anyị na-eme.
Search Engine Optimization ndụmọdụ bụ, ikekwe, ndị kachasị ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ iji nyochaa nzere na… lee anya karịa injin nyocha!